Mpanangona masoandro: toetra, fampiasana ary fiasa | Green Renewable
Portillo Alemanina | | Angovo Solar Photovoltaic
ny mpanangona masoandro Ny mpanangona mafana, fantatra ihany koa amin'ny hoe mpanangom-bokatra mafana amin'ny masoandro, dia ampahany manan-danja amin'ny fametrahana mafana amin'ny masoandro. Ny mpanangona masoandro dia karazana panneau solaire izay tompon'andraikitra amin'ny fakana taratra masoandro ary manova azy ho angovo mafana. Noho izany, ity karazana angovo azo havaozina ity dia antsoina hoe angovo mafana avy amin'ny masoandro.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny mpanangona masoandro, ny toetrany ary ny fampiasana azy.
1 Inona no atao hoe mpanangona masoandro
2 Karazana mpanangona masoandro
3 Ireo singa amin'ny mpanangona masoandro
Inona no atao hoe mpanangona masoandro
Ny tanjon'ity karazana panneau solaire ity dia ny manova ny angovo: ny taratra masoandro izay iainan'ny module solaire dia avadika ho hafanana. Amin'ny karazana fametrahana mafana amin'ny masoandro, io hafanana io ampiasaina hamokarana etona sy hahazoana herinaratra, fa tsy izany no asan'ny mpanangona masoandro. Amin'ny lafiny iray, ny tontonana photovoltaic dia manana fahafahana mamokatra herinaratra mivantana amin'ny endrika mivantana. Ny takelaka photovoltaic dia singa tena ilaina amin'ny fametrahana solar photovoltaic.
Avy amin'ny fomba fijery ara-batana, ny mpanangona masoandro dia mampiasa thermodynamika amin'ny fiovan'ny angovo. Mifanohitra amin'izany kosa, ny takelaka photovoltaic dia tsy mampiasa ny lalàn'ny thermodynamika mba hamadihana ny angovo azo avy amin'ny masoandro, fa ny dingana elektrika.
Karazana mpanangona masoandro
Misy karazany maro ny mpanangona masoandro. Ny mpanangona masoandro ampiasaina dia miankina amin'ny tanjony. Ohatra, raha te-hanafana dobo filomanosana amin'ny mari-pana 25-28 degre Celsius amin'ny lohataona, dia mila mpanangona masoandro tsotra isika, satria ny mari-pana manodidina dia afaka mahatratra mora foana io filaharana lehibe io na ambony kokoa aza. Amin'ny lafiny iray, raha te-hanafana ny fluid amin'ny mari-pana 200ºC isika, dia mila mpanangona masoandro mifantoka mba hanangonana ny taratra masoandro ary hamindra izany amin'ny fluid kely.
Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny tsenan'ny masoandro, dia afaka manavaka ireto karazana mpanangom-bokatra manaraka ireto isika:
Ireo mpanangona masoandro fisaka na fisaka. Ity karazana panneau solaire ity dia maka ny taratra masoandro azon'ny ety ivelany mba hanafanana ny fluid. Matetika ny effet de greenhouse no ampiasaina hisintonana hafanana.
Ny mpanangona masoandro haka ny taratra masoandro. Ity karazana mpanangom-bokatra ity dia maka ny taratra azo amin'ny faritra somary midadasika ary mifantoka amin'ny faritra kely kokoa amin'ny alalan'ny fitaratra.
mpanangona masoandro misy fantsona banga. Ity mpanangona masoandro ity dia misy andian-tavoahangy cylindrical, vita amin'ny absorbers mifantina, hita ao amin'ny sezan'ny reflector ary voahodidin'ny cylinder fitaratra mangarahara.
Amin'ny fampiharana masoandro amin'ny hafanana ambany, ny mpanangona masoandro amin'ny takelaka fisaka no tena ampiasaina. Rehefa latsaka ambanin'ny 80ºC ny mari-pana amin'ny fluid miasa, dia heverina fa ny fampiharana angovo avy amin'ny masoandro dia atao amin'ny mari-pana ambany, toy ny fanamainana dobo filomanosana, famokarana rano mafana ao an-trano ary fanafanana mihitsy aza. Ireo takelaka ireo dia azo ampiasaina tsy misy na tsy misy rakotra fitaratra, arakaraka ny fampiharana.
Ireo singa amin'ny mpanangona masoandro
Ny mpanangona masoandro mahazatra dia ahitana ireto singa manaraka ireto:
ambony: Ny fonon'ny mpanangona masoandro dia mangarahara, mety na tsia. Matetika izy io no vita amin'ny fitaratra, na dia plastika ihany koa aza no ampiasaina satria mora kokoa sy mora entina, fa tsy maintsy plastika manokana. Ny asany dia ny manamaivana ny fatiantoka vokatry ny convection sy ny taratra, noho izany dia tsy maintsy manana fifindran'ny masoandro ambony indrindra izy. Ny fisian'ny fonony dia manatsara ny fahombiazan'ny thermodynamika amin'ny tontolon'ny masoandro.
Fantsona rivotra: Izy io dia habaka (void na void) izay manasaraka ny rindrina amin'ny board absorption. Hojerena rehefa manao kajy ny hateviny mba handanjalanjana ny fatiantoka vokatry ny convection sy ny hafanana mety hitranga raha tery loatra.
Absorbent takelaka: Ny takelaka absorbent dia singa iray mitroka ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary mampita izany amin'ny ranon-javatra mivezivezy amin'ny fantsona. Ny tena mampiavaka ny birao dia ny tsy maintsy manana absorption ambony ny angovo masoandro sy ny taratra hafanana ambany. Satria ny fitaovana tsotra dia tsy mahafeno an'io fepetra io, ny fitaovana mitambatra dia ampiasaina mba hahazoana ny tahan'ny absorption / emission tsara indrindra.
Sodina na fantsona: Ny sodina dia mifandray amin'ny takelaky ny absorption (indraindray welded) mba hanakalo angovo ho ambony indrindra. Amin'ny trangan'ny fantsona, ny ranon-javatra dia hanafana ary hiditra ao amin'ny tanky fanangonana.
sosona insulation: Ny tanjon'ny sosona insulation dia ny manarona ny rafitra mba hisorohana sy hampihenana ny fatiantoka. Satria ny insulation no tsara indrindra, ny fitaovana insulation dia tsy maintsy manana conductivity mafana ambany mba hampihenana ny famindrana hafanana thermodynamika any ivelany.
Mpanampy: Ny accumulator dia singa tsy azo atao, indraindray dia ampahany manan-danja amin'ny tontolon'ny masoandro izy io, amin'ireny tranga ireny dia matetika izy io no hita eo ambony na eo amin'ny sehatry ny maso. Amin'ny tranga maro, ny batterie dia tsy ao anatin'ny tontolon'ny masoandro, fa ny rafitra mafana.
Ny mpanangom-bokatra avy amin'ny masoandro dia ampiasaina indrindra amin'ny famatsiana rano mafana sy fanafanana na famokarana herinaratra.
Ho an'ny mpanangona rano mafana sy fanafanana ao an-trano, ny fitoeran-drano dia mitahiry ny rano ao an-trano mifandray amin'ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny coil. Ny coil dia mamela ny fluid handefa ny angovo mafana voatahiry amin'ny rano nefa tsy mandoto ny rano. Ity rano ity dia azo ampiasaina ho rano mafana ao an-trano (fampidirana 80%), ary azo ampiasaina koa mba hanampiana ny fanamainana ambanin'ny gorodona amin'ny efitrano (10% fampidirana). Ny panneau solaire mafana dia afaka manome rano mafana be dia be, Saingy noho ny tsy fahamarinan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia tsy afaka manolo tanteraka ny fomba fanamainana mahazatra izy ireo.
Ny mpanangona masoandro ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra dia mila manafana ny mpanakalo hafanana ho mangotraka. Raha vantany vao vita ny fiovan'ny dingana thermodynamika ny ranoka ary miditra amin'ny dingan'ny entona, dia alefa any amin'ny turbine thermoelectric., izay mamadika ny fihetsehan'ny etona ho herinaratra. Ity karazana rafitra ity dia antsoina hoe thermodynamika solar ary mitaky toerana be ny fametrahana panneaux solaires sy masoandro mitohy. Napetraka tany an'efitra ny ohatra amin'ireo zavamaniry ireo.
Rehefa mamaritra sy mametraka ny fametrahana ny hafanana amin'ny masoandro dia tsy maintsy raisina fa ny mpanangona masoandro dia tsy maintsy zaraina amin'ny vondrona. Ireo vondrona mpanangona masoandro ireo tokony ho voaforon'ireo singa mitovy modely foana izy ireo ary zaraina araka izay tratra. Misy safidy na karazany fototra roa ahafahana manangom-bokatra roa na maromaro: andiany na mifanitsy. Ankoatr'izay, ny faritra fanangonana rano dia azo amboarina amin'ny fampifangaroana vondrona roa, izay antsoina hoe circuit grouped na hybrid.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny mpanangona masoandro sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Mpanangona masoandro
Karazana fandotoana rano